Badeecad & Adeeg - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Ka dib ku dhowaad 20 sano oo horumarineed, shirkadeena waxay sameysay xirmooyin badeecooyin iyo adeegyo leh farsamada FMBR iyo xudunta. Waxa aan ku siineyno ma aha oo kaliya alaabteena FMBR laakiin sidoo kale waa xirmo horumarsan oo qaan-gaar ah oo lagu daweeyo bullaacadaha.
Qalabka FMBR isku dhafan
Waa qalab isku-dhafan oo lagu daweeyo biyaha wasakhda ah, waxay u baahan tahay oo keliya nidaamka daaweynta ka hor, nidaamka qulqulka iyo waxoogaa yar oo shaqo rayid ah si loo dhiso WWTP, taas oo ka dhigaysa shaqada dhismaha mid fudud oo dhakhso leh. Waxay ku habboon tahay hudheelka, isboortiga qurxoon, dugsiga, koorsada golfka, garoonka diyaaradaha, aagga ganacsiga, magaalooyinka iyo miyiga, daaweynta baahinta iyo iwm.
Warshad daweyn bulaacada oo habeysan
Qalabka isku dhafan ee aadka u isku dhafan wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu ku daro nidaamka gogol dhigga nidaamka ka bixitaanka biyaha iyo qadar yar oo injineernimada madaniga ah si loo dhiso warshad lagu daweeyo bulaacada, taasoo ka dhigeysa dhismaha warshadda daaweynta mid fudud oo dhakhso leh. Waxay ku habboon tahay xaalado badan oo codsi ah sida hudheelo, goobo qurxoon, iskuulo degmooyin ganacsi, magaalooyin, iyo farsamooyin loo qaybiyey.
Adeegga daaweynta bullaacadaha
Waxaan haynaa R & D, naqshad injineernimo, O&M, kooxo wax soo saar kuwaas oo awood u leh inay bixiyaan xalal lagu daweeyo biyaha wasakhda ah, naqshadeynta dhirta lagu daweeyo biyaha wasakhda ah, warshad lagu daweeyo biyaha qashinka O&M, qalabaynta iyo maalgashiga mashruuca biyaha wasakhda ah.
Xalka Daaweynta Biyaha Qashinka
Naqshadeynta WWTP, WWTP O&M
Maalgelinta Mashruuca Biyaha Qashinka